China Kraft Akwụkwọ bag maka Coffee na Tea nkwakọ ngwaahịa na-emepụta | Hong Bang
Dika ndi mmadu na etinyekwu uche na nchedo gburugburu ebe obibi, a na-emeputa ihe nkwakọ ngwaahịa Eco. Ihe nkwakọ ngwaahịa nwere ike ịdabere na nkwakọ ngwaahịa nke akwụkwọ, poly lactic acid, yana ihe ndị nwere ike imebi. Ọtụtụ mgbe, a na-ejikarị obere akpa ebili na nri, tii ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa kọfị.
A na-arụpụta akwụkwọ Kraft guzo ọtọ obere akpa site na ọtụtụ ihe mgbochi nke ihe mgbochi nwere ike ịkewa ya na isi atọ dị iche iche, nke na-ezukọta iji nye obere akpa ahụ njirimara na-adịgide adịgide ma na-agba ume. Ndị otu a bụ:
Nke gara aga: Ikuku Kọlụm Akpa
Osote: White Akwụkwọ akpa nke Ewepụghị ala obere akpa